नेपाली यी वरिष्ठ कलाकारको आज दुखद निधन – Khula kura
नेपाली यी वरिष्ठ कलाकारको आज दुखद निधन
साउन ६ पाेखरा,
वरिष्ठ कलाकार एवं नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्य उत्तम नेपालीको नि धन भएको छ ।
नेपाली अमूर्त कलाका सिद्धहस्त कलाकार मानिन्छन् । उनी ८५ वर्षका थिए ।
उनमा केही दिनदेखि मुटुको समस्या थियो । उनको परिवारमा दुई छोरीहरू छन् ।
कलाकार नविन्द्रराज भण्डारीका अनुसार, मनमोहन कार्डियोभास्कुलर सेन्टर महाराजगञ्जमा उपचारको क्रममा बुधबार बिहान ४ बजे उनको निध न भएको बताएका छन् ।
रत्यौलीमा रमाइरहेकी आमा, जो अचानक गायिका बनिन्
विख्यात फिल्ममेकर सत्यजित रेको एउटा कथा छ, ‘पटोल बाबु फिल्मी स्टार ।’ यसमा एक पात्र छन्, पटोल बाबु । उनको उमेर ५० वर्षको हाराहारीमा छ । जीवनको उत्तरार्द्धमा उनीसँग केही गरौंला भन्ने रहर, आकांक्षा छैन ।
सानो छँदा नाटक, रंगमञ्चमा काम गर्ने खुब रहर थियो । उनले जात्राहरुमा त भाग लिएका थिए । तर, सोचेजस्तो कहाँ हुन्छ र जीवन ? अनेक हण्डर खाँदै उनी गुजाराकै लागि संघर्ष गरिरहे । वैंशालु रहरहरु यत्तिकै थान्को लगाएर ।
तर, एकदिन नसोचेको भयो । उनलाई एउटा फिल्मका लागि अफर आयो । त्यो उमेर-चरणमा अनायासै आएको यो प्रस्तावले उनको मनमा कस्तो हलचल पैदा गर्‍यो होला ? कथाले विस्तारमा भन्छ । पटोल बाबु र चन्द्रा सुवेदीको उमेर मिल्छ, दुवै ५० हाराहारीका । रहर मिल्छ र कथा पनि करिब-करिब ।
सुर्खेत बानियाँटारकी हुन् चन्द्रा सुवेदी । उमेरमा उनी रौसे थिइन् । गाउँघरका बिहे-बटुलोमा गीत गाउँथिन् । मनको कतै कुनामा सुषुप्त रहर थियो, गायिका बन्ने । तर, जीवन त्यत्तिकै घर्केर गयो । मेलापात, घाँस दाउरामै दिनहरु बिते । उमेर पुग्यो, बिहे गरिन् । घरजम भयो, चार छोराछोरी भए । उमेर बुढ्यौलीतर्फ ढल्कियो ।
तर, एकदिन अचम्मै भयो । उनलाई काठमाडौंबाट फोन आयो । त्यो फोन एक गायक/संगीतकारको थियो । उनले फोनमा भने, ‘तपाईं काठमाडौं आउन सक्नुहुन्छ ? गीत रेकर्ड गराउनुहुन्छ ?
म्युजिक भिडियोमा खेल्नुहुन्छ ?’
चर्को विरोध गरेका गगनले देउवालाई अब के भन्छन् ?